Top 6 Manager Android WiFi: Sida loo sameeyo Best Isticmaalka WiFi u Android Phones
1.1 Manager Device Android
1.2 Xiriirada Android Manager
1.3 Manager Android SMS
1.4 Manager Android App
1.5 Manager Android Photo
1.6 Manager Android Podcast
1.7 Manager Android WiFi
1.8 Manager Android Bluetooth
1.9 Manager Password Android
2.0 Manager ah Barzakh, Android
2.1 Manager Kharashka Android
2.2 Manager Android Audio
2.3 Manager Android ROM
2.4 Manager Android Battery
2.5 Manager Android Task
2.6 Manager Android xawaaladaha
2.7 Manager Android Window
2.8 Android Download Manager
2.9 Manager Android Call
3.0 Manager Android Root
3.1 Manager Ogeysiinta Android
3.2 Manager Android Memory
3.3 Manager Android Desktop
3.4 Manager Android Update
Tababare Kaydinta Android 3.5
3.6 Manager Android Project
Haddii aad tahay qof guriga, shaqada ama mushaaxaan ka baxsan albaabka, waxaad marin u leedahay shabakadaha WiFi yeelan doonaan. Iyo in ay isticmaalaan adeegyada aad u baahan tahay oo dhan waa laptop ah wireless karti ama qalab Xararad la WiFi ON wareegeen. Shabakadaha WiFi guud ahaan bixiyaan a xiriir dhakhso badan oo la awoodi karo ka badan waxaad ka heli via joogto ah Mobile Network, oo ka sii fiican, oo weliba WiFi badbaadiyay awood qaar ka mid ah batteriga. Dhab ahaantii, waxa aan ugu duceeyey, isagoo technology sida ee dunida. Sidaasaa, marka aan wajahno wax dhibaato ah oo la xidhiidha la xidhiidha WiFi, waxaan si fudud u xanaaqo oo xanaaqsan. In this article waxaa jira qaar ka mid ah dhibaatooyinka WiFi Android ugu badan oo ah xalalka la soo jeediyay si aad tilmaan dhamaystiran oo ku saabsan mawduuca.
Qeybta 1: Android WiFi Dhibaatooyinka iyo Solutions Qeybta 2: Top 5 Manager WiFi Android Apps Qeybta 3: Maareeyaha WiFi Desktop u Android - Wondershare MobileGo for Android
Tababare Android - One Stop Xalka in Maamul-nololeedka Your Mobile
Mid ka mid ah click inaad kala soo baxdo, maareeyaan, soo dejinta iyo dhoofinta, wareejin music, sawiro iyo videos.
Xiriirada De-nuqul, beddelaan qalabka, maamuli lahayd app ururinta, gurmad & celin iyo soo diro fariimo ka desktop
Mirror qalab android aad in baaq loo diro, iyo ciyaaro kulan Android on your computer
Bedelka Faylal ay ka mid qalab aad mobile xadka aan
Optimze qalab aad ku go la app MobileGo ah.
APK u Android
Connect phone Android la MobileGo
Beddelaan iyo wareejiyo Music inay Android
U dir / Reply fariimaha ka PC
Kaabta iyo Soo Celinta Android
Maamul Xiriirada Android
Download barnaamijyadooda Android, music iyo videos
Qeybta 1: Dhibaatooyinka WiFi Android oo Solutions
Su'aasha 1aad: Ma aan arki kartaa shabakadda WiFi ah
Jawaab: Waxaa jira laba suurtagal:
Marka hore, telefoonada Android yihiin by default qaybiyay si aad u hesho "helaan dhibic" shabakadaha ma "Ad-hoc". Si toos ah xidhmaan Ad-hoc WiFi, si fudud dhayida faylka wpa_supplicant. Laakiin waxa la samayn karaa ku saabsan telefoonada rujin oo kaliya, sidaa daraadeed diyaar by taageero aad file wpa_supplicant asalka hor inta aadan bilaabin off xalka.
Marka labaad, isku day in aad gacanta ku dari shabakada. Sababo ammaan qaar ka mid ah, qaar ka mid ah shabakadaha qarsoon yihiin oo aan tusay si cad. Tag " Settings > WiFi Settings "> dar network ; Dhab ahaan dhamaan xogta loo soo galay waa in si sax ah loo higgaadiyo.
Su'aasha 2aad: My Android WiFi waa si joogto ah u gooyey
Jawaab: Tag goobaha Advanced WiFi, kadib u doortaan barnaamijka "Hayso WiFi on marka la seexdo" iyo hubi in "Mar kasta" doorasho la doorto; waa in la muujiyaa. Si ay u helaan nolol batari dheer, Android disconnects in WiFi marka uu u seexdo. Haddii aad daryeel dheeraad ah oo ku saabsan isku xirnaanta, waa inaad allabariga karo qaniinyada yar la batteriga.
Fiiro gaar ah: qaar ka mid ah WiFi dhinac saddexaad gacanta lagu daadiyo waxaa si toos ah loo qaybiyay si uu u badbaadiyo batari, jeeg si double in ay si fiican u qaybiyay.
Su'aasha 3aad: No helitaanka internet xitaa haddii aan telefoonka ku xiran WiFi ah
Jawaab: Mararka qaarkood waa dhibaato router ah, ogaado haddii router waa baahinta shabakada. Waxaad isticmaali kartaa qalab kale si loo hubiyo in router waxaa hubaal ah baahinta internetka. Xaaladaha kale qaar ka mid ah ay tahay oo kaliya DNS ah, Ciwaanka IP: ga, ama albaab arrinta la xiriira. Si aad dib u helaan aad Internet, oofiyo qaabeynta buugga si uu u xaliyo Ciwaanka IP: ga ah, ee albaab iyo DNS.
Su'aasha 4aad: My phone inta badan u baahan tahay Cinwaanka IP.
Jawaab: Xaaladaha qaarkood, howleheedii router ee wireless hagaajin kartaa dhib ah, laakiin haddii ay dhibaatada ku hayaa muujinaya ilaa, markaas waxaa wanaagsan in la barto IP kala duwan ee cinwaan in router baahin karo. Ogaanshaha kala duwan oo warbaahinta kaa caawin doona inaad ka dhig telefoonka si ay u isticmaalaan cinwaanka IP ma guurto ah halka gaaray shabakadda.
Fiiro gaar ah: Dadka qaar ayaa doorbida la isticmaalayo ah tababaraha WiFi xisbiga saddexaad / jiheeye in gabi ahaanba xakamayn karo nidaamka WiFi ay.
Su'aasha 5: Sida ugu dhakhsaha badan ayaan updated in Android 4.3, Waxaan dhumiyay xirnaanta WiFi.
Jawaab: Iyada oo update ka mid ah OS kasta oo aad ka filan karto arrimo badan. Just reboot galay Recovery, khasnado ka dibna cadaan. Waxaad samayn kartaa qaar ka mid ah raadinta Google si aad u hesho tallaabo-tallaabo hage u ah sida ay u reboot in Recovery u Android.
Kuwani waa ugu badan dhibaatooyinka la xidhiidha wireless la Android. Ha fog ma tegi at jaleecada hore marka aad la kulmi dhib ah isku xirnaanta wireless. Waxaa laga yaabaa in mid fudud sida doorasho WiFi waxaa si qalad ah la demiyo ama aad si qalad ah u soo jeestay oo ku saabsan Diyaaradeed Mode ah. Xaaladdan oo dhan ha ka sarrayso xal ku xusan ma adiga, weli waa mid ka mid xal dahabka ah, Android WiFi Manager App.
Qeybta 2: Top 5 Android WiFi Manager Apps
Si aad ku raaxaysan xirnaanta WiFi agagaarka-ka saac la kaaftoomi lahayn, oo aan wax dhibaato ah farsamo, inaad marwalba u baahan tahay app Tababaraha WiFi ah. Waxaan ku liis ugu sareeya Manager Android WiFi Apps halkan:
Tababare WiFi Free 4.3 / 5
WiFinder Free 4.2 / 5
WiFi kulkulul & USB Biinanka Pro $14.99 3.6 / 5
Zone Free - WiFi Scanner Free Free 4.2 / 5
WiFi Guudmarka 360 Free / Pro 4.3 / 5
Waa qalab fiican u ogaadeen shabakadaha dadweynaha. Oo waxaa iyaga maamushaa si aad u ha inaad si fudud u helaan.
• Baro shabakadaha furan idinku wareegsan.
• tayada xiriir Higher in a channel radar garaafyada mahad.
• Sii walxood oo aad iyo sharraxaado gaar ah si ay goobaha WiFi kala duwan.
• Iyada oo tuubada ah mid ka mid ah, waxaad la iilanin karaa shabakadaha aad ugu jeceshahay.
• laheyn wareegaayo dhexeeya cinwaanada go'an oo firfircoon (DHCP) IP.
• Qaar ka mid ah dadka isticmaala wax cabasho ah oo ku saabsan awoodda ay leedahay in si toos ah u baddashaan shabakadaha la heli karo haddii ay dhacdo network hadda hoos u yahay.
• Wixii Settings Android 2, user ma ku raaxaysan karaan xidhiidh toos ah oo u dhexeeya cinwaanada go'an oo firfircoon (DHCP) IP.
• qaababka qaarkood ayaa u baahan in aad iibsato xirmo lacagta $ 1.75
Download Manager WiFi ka Google Play Store >>
WiFinder waa aalad kale oo weyn u helaan dhammaan shabakadaha WiFi sida Open, WPA, WEP, WPA2. Haddii aad u baahan tahay liiska shabakadaha ay ka mid yihiin channel, sirta iyo heerka graphic, ka dibna waxa ay kaa caawin doona.
• Waxaad si joogta ah u badbaadin karto ama ka saar shabakadaha.
• Taageerada illoobin doorasho.
• function Auto Scan.
• Qaar badan oo kutaan, laakiin version dhawaan go'an qaar iyaga ka mid ah.
• Mararka qaarkood ma xirmaan oo ciidamada inaad isticmaasho goobaha menu si ay u helaan shabakado aad.
• Dadka isticmaala qaar ka mid ah, ay weli ku weydiiyo sirta ah!
• Qaar ka mid ah luqadaha ma taageersana, laakiin dhawaan luqadaha Chinese iyo Jarmalka waxaa lagu daray
Download WiFinder ka Google Play Store >>
3. WiFi kulkulul & USB Biinanka Pro
App Kani waa xalka wacan u daryeela ku saabsan internet meel kasta oo ay tagaan. Waxaaba aad telefoon galay ugu horeeya ee Internet-ka, si aad isticmaali kartaa adiga oo kiniin ah, Console ciyaarta ama xataa online laptop.
• Waxay awood u Internet dhex USB.
• Waxaa si habsami leh oo la shaqeeya isku xirka dhawaan 4G.
• Ma u baahan tahay xididka.
• Waxa kaliya oo la shaqeeya telefoonada qaar ka mid ah si aad u leeyihiin in ay isku dayaan "Lite" version xorta ah in la ogaado in waxa aad telefoon shaqayn doona.
• Waxa aanu la telefoonada HTC ugu shaqeeyaan.
• app wuxuu joojin kartaa wixii Software updates by side wireless ama Android shaqeeya.
Download WiFi kulkulul & USB Biinanka Pro t ka Google Play Store >>
4. Zone Free - WiFi Free Scanner
Iyadoo FreeZone aad si fudud u ogaan karaa oo wuxuu ku raaxaysan la xidhiidha lacag la'aan ah la goobaha WiFi password-free.
• toos ah wargelinta mar magaalo colaadeed WiFi lacag la'aan ah helay.
• map A meelaha kuu dhow in ay bixiyaan wireless helaan shabakad free
• in ay 5 milyan oo shabakadaha WiFi helaan Direct!
• Qaar ka mid ah dadka isticmaala fiirsan waxa adag, waxaa laga yaabaa in aad ka heli naftaada la wadaago aad kulkulul oo uu leeyahay jid ay tirtireyso in.
Download Free Zone - WiFi Scanner Free ka Google Play Store >>
5. WiFi Guudmarka 360
Waa aalad layaab leh u fiican iyo maaraynta network wireless aad loo isticmaalo, iyo in jiffy ah waxaad heli doontaa macluumaad faahfaahsan oo ah WLANs ah: magaca, xoog signal, tirada channel, sirta ee - furan ama aan aad deegaanka.
• Awoodda in ay tayadoodii aad ugu horeeya ee u gaar ah iyada oo tabs "SoL eeg" iyo "SoL. Radar".
• Waxaad ku dari kartaa WLANs gacanta.
• Tablet Support.
• Taageerada 4.x. Android
• walxood Garaafka ee goobaha laga heli karo.
• Haddii network ma isticmaali kala duwan oo kala duwan inta jeer ka shabakadaha kale wireless-qabadka laga yaabaa.
• Si aad ku raaxaysan waayo-aragnimo maamul WiFi ad-free, aad leedahay si ay u iibsadaan version pro.
Download WiFi Guudmarka 360 ka Google Play Store >>
Waxaad hadda heshay fure u joojiso isticmaalka aad 3G Data Network oo wuxuu ku raaxaysan xiriir WiFi waafaqsan daylong oo dhan. Ku raaxayso Saving Money! Hadda waxaa la joogaa waqtigii si aad naftaada siiyo gunno dheeraad ah oo ay bartaan sida loo maareeyo oo dhan xogta aad Android via xiriir WiFi aad.
Qeybta 3: Maareeyaha WiFi Desktop u Android - Wondershare MobileGo for Android
Wondershare MobileGo for Android , oo kooban, waa xal one stop ee maaraynta telefoonka aad Android xirfad leh dhibaatana ma at dhan ah. Laga soo bilaabo raaxada ee aad desktop PC, kuu soo gudbin karaa, raad raac iyo abaabulo oo dhan warbaahinta, xiriirada iyo barnaamijyadooda telefoonka Android oo kiniin ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in ay ku xidhmaan aad telefoon si kombiyuutarka. Dhab ahaantii, waxaad qabtaa laba fursadood xiriirayo: USB iyo WiFi. Xiriir USB Waa wax fudud oo ku filan oo keliya furaysto aad telefoon oo raaca saaxir on-shaashadda. Si kastaba ha ahaatee, xiriir WiFi u baahan yahay faylka apk in lagu xiro telefoonka Android laftiisa. Let`s ku tusaan sida loo sameeyo in si faahfaahsan:
qof ayaa waxaa lagala soo bixi
Sida loo isticmaalo Wondershare MobileGo for Android
1. Sida loo Connect aad PC in Your Android via WiFi
Tallaabada 1. telefoonka aad Android, furo Google Play app. Gudaha gal in aad xisaabta Google.
Tallaabada 2. Raadi Wondershare MobileGo, tuubada rakib soo bixi file MobileGo.apk ku saabsan telefoonka. Waayo, jidadkiisa oo dheeraad ah si ay u soo bixi file apk MobileGo, waxaad riixi kartaa halkan .
Waa sidaas! Hadda waxa aad maamuli kartaa dhammaan xogta aad Android ka raaxada ee shaashadda waaweyn
2. Sida loo Maamul telefoonada Android la MobileGo via xiriir WiFi
Marka aad si guul leh ku xiran ayaa aad telefoon si aad u computer dhex WiFi, wax badan oo aad samayn karto macluumaadka telefoonka aad.
On birta ku leftside, guji Xiriirada, Music, Video, Apps, Photos, SMS, Faylal ay tab. Tani waxay keeni doonaa suuqa kala baahisey. Markaas, waxaad ku dari kartaa, dhoofinta, tirto faylasha.
Articles More laga yaabaa inaad jeceshahay
Xiriirada Android kaabta in Cloud / PC
Messages Anroid kaabta si / PC SD Card
Photos kaabta ka Android inay PC
Phone Android kaabta in PC
Kaabta iyo Soo Celinta Android Phone 1 Click
Lugood u Android inay Maamul Android Well
Ka Lugood in Android Bedelka Music
Top 3 Lugood Alternative for Android Software
Top 7 Lugood Apps u Android Phone
Faylal ay kala soo wareegeen iPhone in Android
Xogta laga Android wareejiyo iPhone
Transfer Xiriirada ka BlackBerry in Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android inay Android Phones Si fudud
Sidee si ay u gudbiyaan Video, Xiriirada, Photos, Calendar, iMessages iyo Music ka iPod
Si fudud Import / Dhoofinta Xiriirada iyo ka Android Phones
10 Optimizers Best u Android
4 Siyaabaha la ogolaan in Phone Android si loo sugo Your Privacy
Sida loo badbaadi Messages Facebook ee Android
Sida lagu Helo Free Ringtones u Android
Top 5 Manager Android App
Sida loo ha Android Sort by Xiriirada Magaca Dambe
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos & Videos ka Phones HTC EVO 3D
Sida loo qabsaday oo Record Android Screen
> Resource > Android > Top Manager WiFi Android 6: Sida loo sameeyo Isticmaal Best of WiFi u Android Phones